जनैपूर्णिमामा यस कारण पुग्छन् तीर्थालु लमजुङको दूधपोखरी ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जनैपूर्णिमामा यस कारण पुग्छन् तीर्थालु लमजुङको दूधपोखरी !
भदौ १०, २०७५ आइतबार १४:०:२८ | श्यामशितल परियार
लमजुङ – धार्मिक एवम् पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रसिद्ध छ, लमजुङको सुदूरपूर्वमा पर्ने दूधपोखरी कुण्ड । जनैपूर्णिमाको अवसरमा यस कुण्डमा नुहाउन आउनेहरुको भीड नै लाग्ने गर्दछ । प्रत्येक जनैपूर्णिमामा यहाँ धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ ।
जनैपूर्णिमाको दिन यस पोखरीमा नुहाए वर्षौंदेखिको रोगव्याधी निको हुने, बोली नआउनेहरु बोल्न थाल्ने, र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ । त्यसो त दूधपोखरी कुण्ड पुग्न भने त्यति सजिलो छैन ।
हिमालको काखैमा रहेको दूधपोखरी पुग्न तीन/चार दिनको कठिन यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिकामा पर्ने दूधपोखरी कुण्ड समुद्री तहदेखि ४ हजार ३ सय मिटरको उचाइमा पर्दछ ।
काशी जानु नपर्ने विश्वास
मनास्लु र हिमालचुली हिमालको काखैमा रहेको यो धार्मिक स्थलमा हरेक वर्ष जनै पूर्णिमामा भक्तजनहरुको ठूलो घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ ।
सर्वोदय सेवा आश्रम लमजुङका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाका अनुसार लमजुङका साथै छिमेकी जिल्लाहरु गोरखा, तनहूँ, कास्कीलगायत चितवन र काठमाडौंदेखि तीर्थालु भक्तजनहरु यस पोखरीमा नुहाउन आउने गर्दछन् । यस पोखरीमा गएर नुहाउनेलाई भारतको काशी जानु नपर्ने विश्वास रहेको छ ।
कहालीलाग्दो भीर–जंगल–खोरिया हुँदै ठाडै उकालो यात्रा गर्नुुपर्ने हुँदा केही असजिलो भए पनि यात्रा भने निकै रमाइलो हुने त्यहाँ पुगेर फर्कनेहरु बताउँछन् ।
‘भीर, जंगल, खोरिया हुँदै ठाडै उकालो यात्रा गर्नुुपर्ने भएकाले यात्रा केही कठिन त हुन्छ नै । तर दूधपोखरी कुण्डमै पुगेपछि सारा दुःख भुलिन्छ,’ लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
दूधपोखरी पुगी फर्केका पत्रकार परमेश्वर अधिकारीका अनुसार दूधपोखरी कुण्ड जाँदै गर्दा बाटोमा भेटिने÷देखिने लेकाली फूलको सौन्दर्यले जो सुकैको मन लोभ्याउँछ । विभिन्न चराचुरुङ्गीको चिरबिराहट मधूर संगीतले मनमा छुट्टै ऊर्जा थप्ने गर्दछ । लोपान्मुख बहुमूल्य जंगली जनावरदेखि जडिबुटीहरु यस भेगका अर्का मूख्य आकर्षण हुन् ।
लमजुङको जोर्नेभन्दा माथि मानव बस्ती नभएकाले त्यहाँ खानेकुरा र पिउने पानीको अभाव खड्किने गर्दछ ।
यात्राका क्रममा पर्याप्त खानेकुरा र खानेपानीको व्यवस्था तीर्थयात्री आफैँले गर्नुपर्छ । दूधपोखरीको यात्रामा सुरक्षित बासको पनि त्यतिकै समस्या छ । बास बस्नका लागि जंगलका ओढार तथा भेडीगोठको सहारा लिनुपर्दछ ।
दूधपोखरी पुग्न ४–५ घण्टाको दूरी बाँकी रहँदा ठाउँठाउँमा भेडीगोठहरु देख्न सकिन्छ । तीर्थयात्रीहरुका लागि त्यहाँका गोठालाहरुले दिल खोलेरै सहयोग गर्छन् ।
गोठमा दूधका विभिन्न परिकारहरु पाइन्छन् । उकालो यात्राको थकाइले ‘लखतरान’ परेका बेला त्रिपालले छाएको साँघुरो गोठमा आगो ताप्दै थकाई मार्न पाउँदा र दूधका परिकारले भोको पेट भर्न पाउँदा तीर्थयात्रीहरु स्वर्गकै आनन्दी महसुस गर्छन् ।
‘दूधपोखरीको संरक्षणमा ध्यान जाओस्’
भेडीगोठबाट झण्डै ४ घण्टा हिँडेपछि दूधपोखरी कुण्ड आउँछ । हिमालको काखमा रहेको हुनाले यहाँ निकै जाडो हुन्छ ।
पोखरीमा नुहाएर पूजा–अर्चना गरी प्रार्थना गर्दा तीर्थयात्रीहरुको मन धेरै हल्का भएको महशुस गर्छन् । दूधपोखरी धेरै उचाइमा रहेकाले त्यस ठाउँमा लेक लाग्ने समस्या पनि त्यतिकै हुन्छ ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको दूूधपोखरी कुण्डको संरक्षणमा सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसको संरक्षण हुन नसके भावी पुस्तालाई दूधपोखरीको धार्मिक महत्व ‘एकादेशको कथा’ हुन सक्ने दूधपोखरीका बासिन्दाहरु बताउँछन् ।
धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको दूधपोखरी कुण्डको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रचारप्रसार हुन सकेको खण्डमा सिंगो लमजुङकै पर्यटकीय एवम् आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचारप्रसारमा सम्बन्धित सबैको ध्यान दिन आवश्यक छ ।